Launch of the EGS Seed Demand-Supply Digital system
Join us for the launch of one of the most unique Seed Digital Intelligence systems for the Delta of Myanmar. This system will warehouse the demand and supply data for the Department of Agriculture and enable seed and grain farmers to see stocks and order seeds in real time. Visit our website for more details (www.riceseedsector.com)
မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာ ပထမဆုံး စတင်အကောင်အထည်ဖော်မယ့် မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီစနစ်မှာဆိုရင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန အနေနဲ့ မျိုးစေ့ ၀ယ်လိုအားနှင့် ခွဲဝေထောက်ပံ့နိုင်မည့် အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်း ရန်နှင့် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်တောင်သူများမှ အမှန်အကန် လိုအပ်သော အချိန် တွင် မျိုးစေ့မှာယူနိုင်မှုနှင့် မျိုးစေ့ သိုလှောင်နိုင်မှုတို့ကို အလွယ်တကူ ကြည့်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုပြည့်စုံစွာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ ၀င်ရောက်လေ့လာပါ။ (www.riceseedsector.com)
The system consists of2mobile apps and 1 web-portal synchronously working towards the handling of EGS and CS (Certified Seeds) in the delta. Mobile app “Quality Seed” is for registering RS demand, CS Demand and handling farmers’ CS inventory. App “Farmer Registration” is for the Township DOA to register the seed growers into the cloud. The web-portal “DOA Administrator” manages the RS inventory of the DOA and DAR Seed Farms and allows the DOA/Seed Division to view and allocate RS (Registered Seeds) to different growers, companies, and NGOs
EGS app gives better networking option and shortens the response time of DOA on seed allocations
ဒီစနစ်မှာဆိုရင် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော application ၂ခုရှိပြီး ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သော ၀က်ဘ်စာမျက်နှာ ၁ခုပါရှိပါသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများရှိ အခြေခံမျိုးစေ့အဆင့်၊ အစောပိုင်းမျိုးစေ့ အဆင့်များ၏ ရောင်းလိုအား ၀ယ်လိုအားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် ထိုစနစ် ၂မျိုးလုံးသည် တပြိုင်နက် တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည့် “Quality Seed” သည် RSမျိုးစေ့ လိုအပ်ချက်များ၊ CSမျိုးစေ့ လိုအပ်ချက်များနှင့် လယ်သမားများ၏ CS မျိုးစေ့ ထုတ်လုပ်မှု စစ်တမ်းများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ‘Farmer Registration” application မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးရုံးမှ မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများအား အွန်လိုင်းသို့ မှတ်ပုံတင်၍ စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ ၀ဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာ ဖြင့် အသုံးပြုခြင်းကို စိုက်ပျိုးရေးရုံးမှ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းတာဝန်ရှိသူများသာ ကိုင်တွယ် စီမံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနဦးစီးဌာနအောက်ရှိ မျိုးသန့်ခြံများမှ ရရှိလာမည့် RS မျိုးများကို ထည့်သွင်းရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာ မျိုးစေ့ဌာနများ ကြည့်ရှုခွင့် ရရန် အတွက် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် မျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူများ၊ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ(NGO)နှင့် မျိုးစေ့ထုတ် ကုမ္ပဏီများအတွက် RSမျိုးစေ့ ခွဲဝေ သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း သတ်မှတ်၍ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် တင်သွင်းနိုင်သည်။
EGS applicationကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိတ်အဆက်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည့်အပြင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ မျိုးစေ့ ခွဲဝေ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ရာတွင် အချိန်တိုအတွင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Better prices, right time sales through the app
Farmers directly connected to market
Seed related “Intelligence” increases
ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဈေးနှုန်းများနှင့် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရောင်းချနိုင်ဖို့ application ကို အသုံးပြုပါ
လယ်သမားများမှ မျိုးစေ့ ဈေးကွက်သို့ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း
မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အသိဥာဏ်များ ပိုမို တိုးတက်လာစေရန်
The "Qualiyty Seed App"
The Android apps installed